As of Tue, 02 Jun, 2020 22:30
कोरोनाको औषधि नै लकडाउन पालना
विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले मानवजगत्लाई नै संकटमा पारेको छ । कोरोना भाइरसका कारण विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र पनि सशंकित भएका छन् । सरकारले मानवीय क्षति रोक्न लकडाउन पालनालाई जोड पनि दिएको छ । चैत ११ गतेदेखि हालसम्म देश नै लकडाउन रहेको अवस्था छ । अत्यावश्यक कामबाहेक सबै ठप्प छन् । सोहीअनुसार जुम्लामा १ सय २० बेडको आइसोलेसन र २ सय ५६ बेडको क्वारेन्टाइन तयार छ भने राहत वितरणका लागि लागत संकलन भइरहेको छ । तर, गाउँघरमा कोरोनाभन्दा काम नै प्यारो भएका कारण अधिकांश नागरिकले लकडाउन उल्लंघन गरिरहेका छन् । यहाँका आठै स्थानीय तह पनि कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाका लागि दिनरात नभनी खटिरहेका छन् । तर, यसमा नागरिकको असहयोगले गर्दा लकडाउन कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले गरेका काम र लकडाउन कार्यान्वयनलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार :
आफूले सकेको राहत दिँदैछौं
कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित छ । होटल तथा रेस्टुराँ, पदयात्रा, ट्राभल एन्ट टुरलगायतका पर्यटकीय गतिविधि रोकिएका छन् । पोखराले देश–विदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसँग समन्वय गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना बनाएको थियो, तर भ्रमण वर्षका देशभरका सबै कार्यक्रम स्थगित भइसकेको अवस्था छ । पोखराका पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईसँग पोखराको समग्र पर्यटनको अवस्थाबारे कारोबारकर्मी दीनानाथ बरालसंग गरेको कुराकानीको सार :
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गरौँ
कोरोना भाइरस महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित छ । होटल तथा रेस्टुराँ, पदयात्रा, ट्राभल एन्ट टुरलगायतका पर्यटकीय गतिविधि रोकिएका छन् । भरतपुर महानगरले देश–विदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसँग समन्वय गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना बनाएको थियो, तर भ्रमण वर्षका देशभरका सबै कार्यक्रम स्थगित भइसकेको अवस्था छ । भरतपुरमा सूर्यास्तदेखि सूर्योदय अवलोकन गर्न मिल्ने ठाउँहरू छन् । पहाडदेखि तराईको अनूभूति दिने गन्तव्यहरू छन् तर हिजोआज यी गन्तव्य सुनसान छन् । भरतपुर महानगरका पर्यटनविज्ञ, सल्लाहकार तथा सह–प्राध्यापक विश्वराज सुवेदीसँग भरतपुर र समग्र चितवनको पर्यटन अवस्थाबारे कारोबारकर्मी विप्लव काफ्लेले गरेको कुराकानीको सार :
अहिलेको समय भनेको आलोचना र विरोधमा अल्झिने समय होइन
प्रदेश १ मा पनि धेरै जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै जनामा कोरोनाको संक्रमित पुष्टि भएसँगै सबैजसो जिल्लामा लकडाउनलाई थप कडाइ गरिएको छ । जसका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा असहजता देखिएको छ । तर, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले चुस्तदुरुस्त बनाएको दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत बताउँछन् । उद्योग, व्यापारी, स्थानीय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको उनको कथन छ । भारतबाट समेत अत्यावश्यक सामग्रीको आयात भइरहेकाले तत्कालका लागि समस्या नरहेको कुसियतले बताए । सबैको साथ र सहयोगले मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सफल हुने उनको दाबी छ । प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमन, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको तयारीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :
बिहिवार, बैशाख ११, २०७७
लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक विवादमा सहमतिको खोजी
मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनको अवधिमा उद्योग–व्यवसाय बन्द भएकाले मजदुरको तलब ५० प्रतिशतमात्र दिने प्रस्ताव निजी क्षेत्रले गरेको छ । तर, मजदुर युनियनहरू भने यसमा सहमत छैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले लकडाउनको अवधिभर मजदुरलाई अधिकतम ५० प्रतिशत तलब दिने साझा प्रस्ताव तय गरेका छन् । मजदुर युनियनहरूले भने सरकारले गरेको निर्णयबमोजिम यो अवधिको पनि पूरा तलब पाउनुपर्ने भन्दै निजी क्षेत्र एक्लैले गरेको प्रस्ताव मान्य नहुने बताइरहेका छन् । रोजगारदाताहरूको सहमतिअनुसार धेरै तलब हुनेको हकमा अधिकतम ५० प्रतिशत तलब दिने भनिए पनि कम तलब हुनेका हकमा भने यसको आधार केही माथिसम्म हुनसक्ने उल्लेख छ ।
कमजोर प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य धेरै बलियो भएको छ
कुलमान घिसिङ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपालमा रहेको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चा कमाएका उनी साढे तीन वर्षअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । कार्यकारी निर्देशक हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने र विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएकोमा तीनवटैमै सफल भएको उनी बताउँछन् । वर्षामा उत्पादनमा आत्मनिर्भर भए पनि हिउँदमा अझै दुई वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ । लकडाउनका कारण उत्पादनमा ढिलाइ भएको बताउँदै आगामी वर्षसम्म नेपालमा उत्पादनको क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुग्ने उनी बताउँछन् । लकडाउनको बेला प्राधिकरणले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिइने विद्युत् वितरणमा गरेको व्यवस्थापन, निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सहजीकरण, तीन वर्षअघिको प्राधिकरण, अहिलेको प्राधिकरण र संघीयतापछिको आगामी प्राधिकरणको संरचनालगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
बजारमा आपूर्ति र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ
चीनको हुवेई प्रान्तको वुहान सहरबाट फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण अहिले विश्वका २ सयभन्दा धेरै मुलुकमा फैलिसकेको छ । अहिलेसम्म १ लाख ६५ हजारभन्दा धेरैको ज्यानसमेत गइसकेको छ । नेपालमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा ३१ जनालाई देखिएको छ भने उपचारपछि ४ जना घर फर्किसकेका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सरकारले ११ चैतदेखि मुलुकभर लकडाउन गरेको छ । अत्यावश्यक वस्तुका पसल बिहान ९ बजेसम्म मात्र खुल्दा सामान खरिद गर्ने उपभोक्ताको भीडभाड लाग्ने गरेको छ । यसबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने डर देखिन्छ ।
न्यून आय भएकालाई लक्षित गरी कोरोना बिमालेख ल्याएका हौं
विश्वव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । विश्वका अत्यन्त विकसित तथा व्यवस्थित मानिएका मुलुकहरूले समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । यसैगरी संक्रमितहरूले उपचार नपाएको, संक्रमण रोक्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको अवस्था छ । यसैगरी नेपालमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दो छ । संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको छ । लकडाउनको अवस्थामा पनि अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप बिमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो सेवा जारी राखेका छन् ।
तलबी बिरामी बिदा नभएकाले महामारीमा काम गर्न कठिन
बिरामीहरूले आवश्यक हेरचाह पाउन र अन्यलाई संक्रमित नपारून् भन्ने विषय सुनिश्चित गर्न भौतिक दूरी कायम राख्नु कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि प्रमुख सहयोगी देखिन्छ । तर, विश्वका बहुसंख्यक कामदारलाई भौतिक दूरी कायम गराउँदै सिफ्टमा राख्नका लागि थोरै मात्र विकल्प छ । यो विषयमा इन्टरनेसनल ट्रेड युनियन कंग्रेसको निष्कर्ष भने चिन्ताजनक खालको छ । यसले महामारीमा रोजगारतादाको प्रतिक्रिया बुझ्न र सरकारको अनुगमन गर्नका लागि विश्वभरिका आफ्ना ८६ सदस्य मुलुकमा सर्भे गरेको थियो । अध्ययनका अनुसार केवल २१ प्रतिशत मुलुकले सबै वा केही कामदारलाई बिरामी बिदा उपलब्ध गराएका छन् । सर्भेमा सहभागीहरूमा ओईसीडीका ३६ मध्ये २८ र जी–२० का मुलुकहरूको १५ लगायतका विश्वका सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थतन्त्र रहेका छन् ।
राज्यले संयमित भएर योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुकोे विकल्प छैन
चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विकासोन्मुख विकासशील देशमात्र नभएर उदीयमान शक्तिशाली मुलुक चीनदेखि सर्वशक्तिमान देश मानिने अमेरिका र युरोपियन मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत ठूलो धक्का लागेको छ । कोभिड–१९ को त्रासले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने देखिएपछि विभिन्न मुलुकले आपत्कालीन राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा राहत घोषणा गर्ने क्रम पनि जारी छ । कोभिड–१९ कै कारण विश्व अर्थतन्त्र ९० वर्षयताकै खराब अवस्थामा आएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सतर्क र सावधानी अपनाउन सबै मुलुकलाई सुझाएको छ । कोरोनाकै महामारीले आफ्नो अर्थतन्त्र संकटतर्फ जान नदिन र लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न भन्दै कतिपय मुलुकले ब्याजदरमा समेत कटौती गरेका छन् ।
आर्थिक क्षेत्र पुनःउत्थानमा निजी क्षेत्र एकजुट
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमित तथा यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या लगातार बढिराख्दा नेपालमा संक्रमितको संख्या कम नै छ भने मानवीय क्षति छैन । तर, संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव भने उच्च संख्यामा संक्रमित भएका देशको जत्तिकै नेपालमा पनि परेको छ । विगत तीन हप्तादेखिको लकडाउनले आर्थिक गतिविधि लगभग शून्य रहेको र त्यसभन्दा अघिदेखि बन्द गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अन्य निवारक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् ।
बुधवार, बैशाख ३, २०७७
लकडाउनको छेकोमा कसरी गर्ने वनको सुरक्षा ?
यतिबेला विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट गुज्रिरहेको छ । यो विषम परिस्थितिबाट कसरी जोखिने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि लकडाउन गरिएको छ । घरबाट बाहिर ननिस्कन सरकारको निर्देशन छ । ज्यान जोगाउन छोडेर तस्करहरू भने वनमा सलबलाउन थालेका छन् । यो विषम परिस्थितिको छेकोमा समेत वन तथा वन्यजन्तु तस्करी बढिरहेको छ । कसरी नियन्त्रण गर्ने ? र वन तथा वन्यजन्तु कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ यतिबेला । समयमा नै सतर्कता नअपनाउने हो भने वन तथा वन्यजन्तुको चोरी तस्करी अझै बढ्न सक्ने खतरा देखिन्छ । चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारी, अपनाउनुपर्ने सवाधानी, सुझावलगायतका विषयमा विभिन्न सरोकारवाला व्यक्तिसँग कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :
मंगलबार, बैशाख २, २०७७
कर्णाली प्रदेश सरकार कोरोना प्रतिकार्यका लागि तयार छ
विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)को प्रतिकार्यका लागि नेपालका तीन तहका सरकार आ–आफ्नो ठाउँबाट लागिरहेका छन् । भौगोलिक हिसाबले सबैभन्दा ठूलो र कोरोना भाइरसको उत्पति भएको चीनसँग नाका जोडिएको कर्णाली प्रदेश पनि प्रतिकार्यका लागि आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा भारत जाने र चीनसँगसमेत नाका जोडिएको कारण कर्णाली प्रदेश अन्यभन्दा जोखिमा रहेको आंकलन चलिरहँदा भौगोलिक विकटता र यातायात असुविधाका कारण कोरोनाविरुद्धको प्रतिकार्यका लागि उत्तिकै चुनौती बनेको छ । यस्तै विगतलाई हेर्दा कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा यो समयमा झाडापखाला, मौसमी रुघाखोकी लगायतका रोगले महामारीको रूप लिने गरेको पाइन्छ ।
कोरोना रोकथाममा खुला सीमाना नै प्रमुख चुनौती
विश्वभर कोरोना भाइरसले जनजीवन प्रभावित पारेको छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको प्रभावले गर्दा लकडाउन गरिएको छ । विश्वभर कोरोना भाइरसका बिरामी बढ्दै जाँदा नेपालमा त्यसको प्रभाव पर्न सकेको छैन । हालसम्म ९ जनामा यसको प्रभाव देखिए पनि १ जना उपचारपछि घर गएको अवस्था छ भने बाँकी ८ जनाको उपचार भइरहेको छ । यसै विषयमा सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग कारोबारकर्मीले खुला सीमाना र यसले पार्ने प्रभावका बारेमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
अहिले काम गरेर देखाउने समय हो
यो अस्पतालबाट नमुना परीक्षणका लागि बिरामीको स्वाब काठमाडौँ वा हेटौंडा पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको ‘राष्ट्रिय पंछी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला’ मा महानगरकै पहलमा ‘कोभिड–१९ परीक्षण प्रयोगशाला’ स्थापना गरियो । २३ गतेदेखि सुरु भएको यो प्रयोगशालामा २६ गतेसम्म ४५ नमुना परीक्षण भए । कुनैमा पनि संक्रमण भेटिएन । भरतपुरको पहिचान ‘मेडिकल सिटी’ पनि हो । क्यान्सर अस्पताल, केन्द्रीयस्तरको भरतपुर अस्पताल, २ ठूला मेडिकल कजेल, दर्जनौँ निजी अस्पताल छन् । भरतपुरमा करिब १५ जिल्लाका बिरामी उपचारका लागि आउने ठाउँ पनि हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने उपायमध्ये बेलैमा संक्रमण पहिचान गर्नु पनि हो । स्थानीय सरकारलाई यो बेला काम गर्न सहज छ त ? भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेनु दाहालसँग कारोबारकर्मी विप्लव काफ्लेले गरेको कुराकानी :